ဒုက္ခရောက်နေသည့် ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ မဆိုင်းမတွ ဆောင်ရွက်ပေးနေ၊ ပိုမိုထိရောက်သည့် အစီအစဉ်များကို ချမှတ်ထားဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဆို
အစိုးရက ပြည်သူ့အစိုးရဖြစ်သည့်အတွက် ပြည်သူ၏ ယုံကြည်မှုရအောင်တည်ဆောက်နေပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားနေသည့် ARSA အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်များကြောင့် ပြည်သူများဒုက္ခရောက်နေမှုများအတွက် လူသားချင်းစာနာသည့်အကူအညီများကို နှောင့်နှေးမှုလုံးဝမရှိအောင် မဆိုင်းမတွတုံ့ပြန်ဆောင် ရွက်ပေးနေကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ် အေးက ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် H.E. Shri Narendra Modi ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် H.E. Shri Narendra Modi ဦး ဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တို့ စက်တင်ဘာ ၆ ရက် နံနက်ပိုင်းက နေပြည်တော် သမ္မတအိမ် တော်သံတမန်ဆောင်တွင် မြန်မာ- အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံနားလည်မှုစာချုပ်(MoU) လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ကြရာ နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်နှင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် H.E. Shri Narendra Modi ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တို့ နှစ်နိုင်ငံသီးသန့်တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမား ၄ဝ ကျော် စစ်တကောင်းဆေးရုံတွင် ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူလျက်ရှိ
အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်များ အတွင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် ARSA အစွန်း ရောက်အကြမ်းဖက်သမား ၄၁ ဦးတို့သည် တစ်ဖက်နိုင်ငံရှိ စစ်တကောင်းဆေးရုံ၌ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက ထုတ်ပြန်ထား သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ခြမ်း၌ လုံခြုံရေး ရဲကင်းစခန်းများ၊ တပ်ဌာနချုပ်များအား ARSA အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားများအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို ဖြစ်စဉ်များအတွင်း သေနတ်ဒဏ်ရာရရှိထား သည့် ဘင်္ဂါလီရှစ်ဦးနှင့် အခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိထားသည့် ဘင်္ဂါလီ ၃၃ ဦးတို့သည် သြဂုတ် ၃၁ ရက်တွင် တစ်ဖက်နိုင်ငံရှိ အူခီးယားမြို့ နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စစ်တကောင်းဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင် ပေးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ကချင်ပြည်နယ်ကို ခိုးဝင်လာသည့် တရုတ်နိုင်ငံသား သုံးရာကျော်ကို လဝက ဥပဒေဖြင့် အရေးယူ
ကချင် ပြည်နယ်တွင် နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ပြည်ပနိုင်ငံသားတရားမဝင် ခိုးဝင်လာသည့်အမှုပေါင်း သုံး ဆယ်ကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယင်း အမှုများမှ တရုတ်နိုင်ငံသားသုံးရာ ကျော်ကို လဝကဥပဒေဖြင့်အရေးယူမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ကချင် ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။ ၂ဝ၁၅ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၇ခုနှစ် သြ ဂုတ်လကုန်အထိ ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းသို့ နယ်စပ်မှ ပြည်ပနိုင်ငံ သား ခိုးဝင်လာသည့်အမှု ၃၄ မှုမှ တရုတ်နိုင်ငံသား ၃၄၈ ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ¤င်းတို့ကို လဝကဥပဒေ ဖြင့် အများဆုံး ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပြီး သစ်ခိုးထုတ်ယူမှုအပြင် ပုဒ်မ ၆(၁)ဖြင့် အရေးယူခဲ့သည့် အမှုတချို့လည်းရှိကြောင်းသိရသည်။ ဖမ်းဆီးရမိသည့် တရုတ်နိုင်ငံသား ၃၄၈ဦးကို ရဲတပ် ဖွဲ့နှင့် အခြားပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များ က ယင်းနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်၊ မြစ်ကြီး နား၊ ဗန်းမော်၊ မိုးညှင်း စသည့်မြို့ များမှ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အင်းဝ အပ်ချုပ်ဆိုင်အမှု စွပ်စွဲခံ ကိုရာဇာထွန်း၏ ညီအစ်ကို ဝမ်းကွဲကို တရားခံပြ သက်သေအဖြစ် စစ်ဆေး
အင်းဝ အပ်ချုပ်ဆိုင်အမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး စွပ်စွဲခံ ကိုရာဇာထွန်း၏ညီအစ်ကို ဝမ်းကွဲတော်စပ်သူကို စတင်စစ် ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်က အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး၌ စွပ်စွဲခံ ကိုရာဇာထွန်းနှင့်ဇနီး မစုမွန် လတ်တို့ဘက်မှတင်ထားသည့် တရားခံပြသက်သေ ကိုရာဇာလွင်ကို စစ် ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ''ဒီနေ့ ခံပြသက်သေကတော့ စွပ်စွဲခံဘက်ကတင်ထားတဲ့တစ်ဦးကို စစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ နောက်ရုံးချိန်းမှာလည်း အရပ်သားသက်သေကို စစ်ဆေးမှာပါ''ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်က ပြောသည်။
21-09-2017 Hits:161 Article ဌေးဌေး